Posted on 10 / 12 / 2019 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
Ity dia ho topy maso ankapobeny ho an'ny fahalalana ankapobeny fotsiny, tsy ho fitarihana fomba. Tsy midika izany fa ekeko ny fampiasana azy ary tsy ny fanekena ny fampiasana azy.
Matetika no diso hevitra na diso diso hevitra- misy karazany hafa steroid. Corticosteroids, izay misy voka-dratsy ratsy kokoa noho Anabolic Steroids, noho ny antony sasany dia tsy demonia amin'ny haino aman-jery ary ny fampiasana azy dia azo ekena amin'ny ankamaroan'ny tranga- ao anatin'izany ny fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny ady amin'ny fivontosana. Misy koa Progesterone izay ampiasaina amin'ny endrika fanaraha-maso ny ankamaroan'ny zaza ary alain'ny vehivavy an-tapitrisany isan'andro. Steroid anabolika (voalaza eto hoe AS na AS) no eritreretin'ny ankamaroan'ny olona vao nahare "steroid" voalohany sy ireo zavatra ratsy rehetra mifandray aminy.
A) Atrofy fitsapana- rehefa manampy be dia be ianao testosterone manomboka mihidy HPTA ny vatanao (mijanona tsy mamokatra testosterone satria mihena mihoatra ny ampy ny vatanao); Raha fintinina izany dia mampihena ny baolinao. Ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy tsikaritra akory. Mihena 25% angamba, 50% be indrindra. Raha vantany vao miala tsingerina ianao dia alefaso ny PCT (Post-cycle therapy) hiverina amin'ny habe feno. Tsy maharitra. Ny olona sasany dia mihazakazaka HCG (Human chorionic-gonadatropin) mandritra ny bisikileta hitazomana ny baolina ho feno habe ary manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny satria mitazona ny sela leydig anao.
B) Alahelo / volon-doha: AS tsy miteraka ny aretin-doha na ny fihenan'ny volo. Na izany aza, afaka manafaingana ny dingana izany. Raha mihazakazaka eo amin'ny ankohonanao ny volon-doha, dia mahagaga anao fa mety ho kandida ianao hanafainganana ity dingana ity. I Bill Roberts dia nanoratra momba ny karazana Steroids roa-Type I sy Type II; Type I was compound lehibe toy ny Testosteron, Tren, Decca, Sust, sns ary ny karazana II mitovy Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron sns Ny ankamaroan'ny olona dia manome tsiny ny zava-mahadomelina toa an'i Winstrol ary Masteron Enanthate (Drostanolone) satria izy no tompon'antoka amin'ny fihenan'ny volo ary manandrana manalavitra ireo fanafody ireo rehefa miahiahy momba ny MPB, raha tsy izany no izy- ny karazana I dia nisy fiatraikany lehibe kokoa tamin'ny MPB (fomban-doha lahy) fa tsy ireo karazana fanafody hafa. Ary mazava ho azy fa ny fanafody mifototra amin'ny DHT (toy ny deca) dia ho henjana kokoa amin'ny hodi-dohanao. Ny fomba tokana hiadiana amin'izany dia amin'ny alàlan'ny fakana shampoos karazana rogaine ho an'ny lozisialy sy zavatra hafa roa i Finasteride (propecia / proscar)
C) mony- mipoitra ny tarehy sasany; misy olona mipoitra eo amin'ny tratrany na any aoriana… ary madiodio ny hoditry ny olona sasany. Averina indray fa samy hafa ny fiatraikany amin'ny tsirairay.
D) Mahatsiaro ho toy izany aho fa tokony ho rakotry ny atrophy testicular ary somary nanadino fotsiny aho. Imbetsaka aho no maheno ny olona miresaka momba ny AS manao izay hampihenananao ny diako, raha ny tena izy dia ny balinao. Noho izany, raha hazavaina, ny dickanao dia tsy mihena ary izany dia misy dikany betsaka amin'ny filazana fa ny famaohana ny orona dia mamontsina ny oronao. Raha misy izany, miaraka amin'ny ra bebe kokoa mankany amin'io faritra io dia lazaiko fa ho mora tohina amin'ny zava-mitranga mifanohitra amin'izany ianao. Miankina amin'ny fitambarana raisinao- ny fanafody sasany toa ny Deca sy Tren dia mety ho henjana amin'ny libidoo (noho izany ny andian-teny hoe "deca-dick") ary nisy bandy nifidy ny handray Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) na viagra (tsy mila izany) fa ny fanafody hafa toy ny fitsapana mivantana (izay mety ho karazana) na dbol dia hampiakatra ny rindrina ary ho tezitra toy ny… .. Ny ankamaroan'ny tovovavy manambady na ny olon-tiana amin'ny bisikileta dia toa mankafy ny filahiany mandeha bisikileta, lol.
E) "Roid-rage" - Tsy misy izany. Tsotra toa izany. Raha olona tsy milamina ianao, eny, hataon'izy ireo tsy milamina kokoa ianao. Fa avy eo indray, zavatra hafa sy fanafody maro hafa no mety hiteraka izany. Raha tsy milamina ara-tsaina ianao na voan'ny aretin-tsaina aza dia tsy tokony hieritreritra handray steroid ianao. Maniry aho fa ho toy izany koa ny amin'ny alikaola. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy voakasik'izany. Ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa ho toy ny amin'ny toe-tsaina tsara kokoa na tsy misy hafa mihitsy. Afaka mahita ny olona miha mahazo vahana kokoa aho satria somary lehibe sy somary matanjaka kokoa, saingy ankoatr'izay, izay mitatitra ny "hatezerana" (andrim-panjakana na tsia) dia horseshit.
Ny Steroids dia tsy mahatonga ny olona ho faty na mitarika ny fahafatesany noho ny fihetsika ratsy sasany. Tsy nisy fanadihadiana ara-tsiansa mampiseho rohy mivantana amin'ny steroid anabolika sy ny fahafatesana. Hanondro an'i Zyzz ny olona, ​​saingy tsy hanondro ny tantaram-pianakaviany momba ny aretim-po / toe-piainana izy ireo ary mieritreritra aho fa tsy natao ampahibemaso ny fanaovana autopsie? Manonona ny statistikan'ny CDC tamin'ny taona 2005 avy amin'ny Bigger Stronger Faster:
Eny, raha diso ny fomba fanaovana steroid dia mety hampidi-doza izany. Ny steroid am-bava (toy ny dbol, wintrol, anavar, sns.) Dia hepatoxic ary mety hasiaka be amin'ny atiny raha alaina amin'ny doka avo loatra sy mandritra ny fotoana maharitra… ary raha misotro toaka mandritra ny bisikileta. Izany no antony anolorana azy ireo hatao momba ny rà mandriaka alohan'ny, mandritra ary aorian'ny tsingerina. Ny fakana zavatra toy ny tsilo amin'ny ronono dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny enta-mavesaky ny atinao.
Ny tsindry amin'ny ra dia mety ary hiakatra, miakatra kokoa noho izany raha miankina amin'ny famokarana raisinao (indrindra Môtandrostenolone (Dianabol) ary EQ). Ny fandraisana vary masirasira mena dia afaka manampy amin'ny fihazonana ny kolesterola sy ny BP amin'ny fanaraha-maso. Azo antoka fa zavatra tokony harahi-maso izany. Ary azo antoka fa antony tokony hihinananao CLEAN izany mandritra ny bisikileta- tsy mihinana pizza, burger ary fries.
Steroids dia mandray intramuscularly- tsy intravenously. Tsy misy fonosana amin'ny tadinao na inona na inona. Raha te hiditra amin'ny lalan-drà na lalan-drà ianao dia mety maty. Misy tranokala tsindrona manokana- ny fehikibo, quad, glutes ary ny ventro-gluteal no azo antoka indrindra. Matetika ny olona dia mihevitra fa ny boriky / glutes no tranonkala azo antoka indrindra, tsy hanaiky aho satria sarotra ny manatratra izany ary satria ny nerve sciatic dia manakaiky ny faritr'io faritra io ary raha mahatratra izany ianao dia mirary soa amin'ny andro sisa iainanao.
Steroids dia ary tsy fanafody fahagagana. Afaka mipetraka eo ambony sezalava ianao ary hihinana poti-ovy ary mety hihalehibe, fa raha izany no hataonao rehefa maka azy ireo dia tsy tokony hanelingelina ny volanao akory ianao. Mbola mila manao ny asa ianao. Mbola mila misakafo madio- hoy aho hoe madio kokoa aza. Mbola mila manara-maso ny zava-drehetra.
Pro-hormonina Tsy safidy azo antoka amin'ny steroid satria azonao atao ny mividy azy ireo ao amin'ny GNC / Nutrition Lengkap / Na aiza na aiza. Mampidi-doza INDRINDRA izy ireo ary matetika ianao dia tsy afaka mividy fanafody PCT tena izy ao ary avy eo mandeha amin'ny làlana tena maranitra mankany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ianao- raha toa ka sitrana daholo. Betsaka ny ankizy niafara tamin'ny TRT nandritra ny androm-piainany noho io. Tsy azoko hoe mbola tsy nisy ny fitoriana taorian'ireo fitoriana ireo fivarotana ireo.
Miasa tsara amin'ny fananganana hozatra ve ny MK-677 (Ibutamoren)? Sarm Review [Vaovao] Torolàlana momba ny fividianana tanteraka ho an'ny bodybuilding SARM SR9009